China Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wardrobe Bedroom Ifenisha # 0108 Ukwakha kanye nefektri | Yamazonhome
I-Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wardrobe Igumbi lokulala Ifenisha # 0108
Inombolo imodeli: Amac-01 08
Usayizi: 1600mm * 560 * 2000mm
Design-make home eduze nemvelo
Inhloso yethu yasekuqaleni kwakungukwakha ikhaya elisesitayeleni labamaphakathi baseChina. Vumela ukukhanya kwelanga kweNordic kukhanye ngobumnene ikhaya, futhi idizayini elula kodwa engeyona elula izobuyisela ikhaya ebuhleni balo beqiniso.
I-oki elimhlophe lingeniswe lisuka eNyakatho Melika ukudala uhlaka oluqinile oluqinile
Ukukhethwa okuqinile kwezinto okwenzelwe kuphela ifenisha esezingeni eliphakeme, kanti okusanhlamvu okwemvelo okhuni lwamanzi agelezayo kuletha umoya omuhle nokahle. Isilayidi esikhulu senzelwe ngqo futhi ubuciko bukhulu kakhulu. Siqale ukusika izinkuni zibe yi-5-11cm. Lobubanzi bungaqinisekisa ukhuni. Izinkuni ezizinzile zikhubazekile futhi zingakhombisa uhlamvu lwenkuni oluphelele futhi olubushelelezi, bese umbala ukhethwa ngumsebenzi osebenza ngokhuni onolwazi. Izinhlamvu nebhodi kuyafana.
Push-donsa ekhabetheni + esiqinile isiphanyeko sokhuni
Idrowa lokukhipha ifaniswe nebhodi yocingo ezansi ukwenza isitoreji sibonakale futhi siqoqeke. Izinto zangasese zingafakwa ekhabetheni, kuthi ibhodi yocingo likwazi ukulengisa amathawula, izikhafu, njll. Ifenisha yenzelwe ngokukhethekile izesekeli ezisezingeni eliphakeme nezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo nezinto ezehlukene. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezahlukahlukene zokusebenza nezokuhlobisa, zonke zilandela ngokuqinile izidingo zamazinga wamazwe omhlaba, futhi zithole izivivinyo eziningi ze-acid-base kanye nokugqwala ukuqinisekisa ukuthi ngeke zikhubazeke ukusetshenziswa kwesikhathi eside.
Thulisa isilayidi sehadiwe
Isitimela somhlahlandlela wensimbi, bushelelezi futhi buthule. Njalo lapho uvula futhi uvale, ungaba nomoya obushelelezi futhi omuhle. Iphaneli eseceleni yelula u-10mm futhi ilingana nohlaka lomnyango wephakeji. Lapho umnyango we-sliding uvaliwe, akukho gebe futhi akukho uthuli.
IKhabhinethi ephezulu efanayo
Ngekhabethe eliphezulu, isikhala esime mpo sisetshenziswa kakhulu, futhi inkinga yesitoreji sezingubo ezingaphandle kwesizini ixazululwa yikhabhinethi eyodwa ephezulu. Amalunga wokunwebisa "uhlelo lokuzivikela" lwefenisha yokhuni oluqinile, futhi agodliwe ukuvumelanisa ukhuni oluqinile ezindaweni ezahlukahlukene. Inqubo yokukhiqiza ilawulwa ngokuqinile, futhi isipiliyoni sokukhiqiza sicebile. Ngemuva kwezinqubo eziningi zokugaya nokugaya, ubuso bomkhiqizo ophelile buyindilinga futhi bushelelezi.
Ayikho idizayini yekhabethe yomlenze
Izingxenye ezibalulekile zixhunywe ngenqubo yendabuko ye-tenon ne-tenon, isakhiwo siqinile, futhi izingqinamba eziqinile zingathuthukisa ngempumelelo ukuzinza kwekhabethe futhi zenze isikhathi sokuphila sisebenze. Isisekelo sokuma phansi sizinzile futhi asinakho ukuhlanzwa, futhi onqenqemeni bamukela isakhiwo sangaphakathi esingenalutho ukugwema ukulimala kokushaywa ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
Langaphambilini Wonke ama-Solid Wood Chest of Drawers Living Room Bedroom Nightstand # 0103
Olandelayo: Isitayela Esilula Sombhede Wendawo Yokulala Igumbi Elilula Elingasentshonalanga # 0109
2019 entsha emi SUP surfboard ezokungcebeleka amanzi s ...
Modern futhi Simple Solid Izinkuni Small Indlu TV ...
Imfashini ifulethi elincane igumbi lokuphumula ukhuni oluqinile ...